11 Linux Kubatsira Vashandisi Vanofanira Kuziva nezve | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft yanga ichiita kuti zvinhu zvive nyore kune vedu vanonyora nezveLinux kubvira 2007. Haana kungotisiira zita rekushandira paakabhabhatidza mutsivi weXP se "Vista" (Musoro wepositi wakanyorwa wega) asi iro vhezheni yaive nematambudziko akawanda zvekuti "Goodbye Windows!" aive magineti evaverengi.
Zvino kwakauya "Zvikonzero zvinomwe zvekusiya Windows", iyo "Zvikonzero zvisere Linux iri Nani" uye "Zvinhu Zvine Linux Zvinorova Windows pa."
Zvisinei, kubva kuRedmond vakasarudza kutikanganisira. Iyo yakareba span yekukanda pakatie Windows shanduro aimbova nemakore matanhatu. Uye, kubvira Windows 10 iri kubva muna 2015, vese mabloggi vakatogadzirira yedu posvo neiyo 11 yakatanhamara yeLinux. Asi, hakuzove neWindows 11
Windows 10 iri morphing muRolling Release iyo inogamuchira inogara ichiwedzera yekuwedzera. Sezvo kambani inoda kutama kubva kune yayo rezinesi system kuenda kunyoreswa pamwedzi, shanduko inoita yakawanda pfungwa.
Zvisinei, pane chinhu chekuenda uchitambisa post. Naizvozvo, hechino chiunganidzwa changu chegumi nemana mabhenefiti eWindows.
Kune rimwe divi, Microsoft iri kushanda pane hombe mushandisi ruzivo rwekuongorora kweWindows pasi pekodhi zita Sun Valley. Iyi shanduko ine nyowani yakatarwa yekutanga menyu uye kugadziriswazve kwebarbar yebasa, nyowani nyowani, iconography, ruzha uye akagadziridzwa mashandisirwo ekushandisa. Kune rimwe divi, mabasa matsva anowedzerwa senge mawadhiji, nani hwindo kugadzirisa pakati pevamwe.
Microsoft CEO Satya Nadella akaidana kuti "inonyanya kukosha Windows kugadzirisa mumakore gumi apfuura."
Mune mamwe mazwi, hatifanire kurasikirwa netariro kuti vachamonana (*)
11 zvakanakira Linux
Asi ngatiregei kutaura zvakaipa nezvemakwikwi uye ngatitarisei pane kwedu pachedu kunaka.
Zvisiri-zvisinganzwisisike zvinyorwa: Windows 10 inogadziridza mudumbu. Kunze kwekunge iwe uchivarongera kana iwe uchienda kunorara, iwe unofanirwa kumira kushanda uchakamirira kuti vapedze kuisa. Uye kana paine kukundikana mukuita, iwe unofanirwa kuvamirira kuti vapedze kusunungura uye vadzokorore maitiro acho. Kugoverwa kweLinux kunoisa izvozvi paunenge uchishandisa komputa, uye kunyangwe zvichiratidza kudiwa kwekutangazve, vachamirira kusvikira wagadzirira kuzviita.
Mariro: Kunze kwekunge iwe uchida kutora chikamu muInsider chirongwa (uye kurasikirwa nekugadzikana) kushandisa Windows iwe unofanirwa kubhadhara, kungave rezinesi kana kunyoreswa. Mazhinji maLinux kugoverwa mahara, uye mamwe eanobhadharwa, chete Ivo vanokubhadharisa kana iwe vanoda rutsigiro rwehunyanzvi.
Hapana software isingakoshi: Kugoverwa kweLinux kune ekutanga modes ekumisikidza ayo anongosanganisira iyo chete browser uye zvirongwa zvakakosha pakuita kwesisitimu. Iwe sarudza zvaunoda kuisa.
Iine software inodiwa: Kune rimwe divi, kuisirwa kuisirwa kwechero kugoverwa kweLinux kunosanganisira zvirongwa zvemuhofisi, vatengi vema mail, multimedia players uye zvese zvaunoda kushandisa komputa yako kubva panguva yekutanga.
Akawanda matafura. Imwe yeyakagoverwa yeLinux ine zvinyorwa zvine akasiyana desktops ane akasiyana mushandisi maficha ezvese zvavanofarira. Iwe unongoda kutsvaga iyo inokodzera zvaunoda.
Kuchengeteka kukuruKunyangwe pasina sisitimu yekushandisa iri benzi mushandisi-chiratidzo, kuvakwa kweLinux nebasa rayo uye mvumo sisitimu kunoita kuti iwedzere kuramba kubiridzira.
Kuenderana kumashure: Kugoverwa kweLinux kuri kushomeka kune yakasarudzika obsolescence uye inobvumidza iwe kushandisa makomputa kwenguva refu. Uye, kune mamwe akagadzirwa chaizvo kune ekare mamodheru.
Instant kugarisana nezvakawanda zvinowoneka: Nhasi, kugoverwa kweLinux kunobvumidza imwe nzira yekuchinjana faira nemakamera, nharembozha uye maprinta pasina kudikanwa kwekuiswa kwevamwe vatyairi.
Wide akasiyana mapurogiramu: Kubva kumatura ezvishandiso ivo pachavo uye nevamwe vanochengetwa nevechitatu mapato, zviuru zvezvirongwa zvekushandisa nemitambo zvinogona kutorwa pasi kune zvese zvinodiwa.
Error correction: Mazhinji matambudziko ekuchengetedzwa kweLinux akaonekwa nevatsvakurudzi uye aigona kungoshandiswa pasi pemamiriro ezvinhu angangoitika kunze kwerabhoritari. Dzese dzakakurumidza kugadziriswa nevakagadziri uye dzakabatiswa nezvikamu zvakasiyana.
Unogona kutora chikamu: Mazhinji ekuvandudzwa kweLinux yakavhurika sosi. Izvi zvinoreva kuti kana iwe uine zano kana kushoropodza, iwe unogona kuzviunza padyo nenzanga uye nekuzviita zviwanikwe kune wese munhu.
* Kana mumwe mweya unonzwisisa ukasanzwisisa kuti idambe, ndinojekesa kuti ndanga ndiri muchirongwa cheWindows Insider kubva pakutanga. Kana vakamonyoroka, ini ndichave ndiri wekutanga kutambura mhedzisiro yacho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » 11 Linux Kubatsira Vashandisi Vanofanira Kuziva
Zvese izvo hafu yechokwadi
Linux inoshamisa, kuverenga tsamba, kunyora maemail, tarisa bhaisikopo, (sekureba sekushandisa VLC) uye nguva pfupi yadarika naPipewire kurira kwakavandudza zvakanyanya; ASI ZVIMWE ZVAKAWANDA
Mufananidzo wacho: Kanganwa, makore akareruka kubva pane zvaunogona kuita nema windows
Ruzha rwepamusoro-soro: Kanganwa Ardor inyonganiso kana ichienzaniswa nezvimwe zvese, uye kunze kweKana Mhuru zvimwe zvese zvinosemesa,
Asi chakaipisisa ndechekuti kubva paminiti iwe paunotanga neLinux unoshurikidzwa kuenda parwendo rwekusingaperi kuburikidza neGoogle kugadzirisa matambudziko anegumi neumwe anomuka, ane mhinduro dzakataurwa ne "nyanzvi" hadzisi dzakafanana uye zvakanyanya nguva havashande
An M ... yakanamatira padanda
Uye izvozvi mafeni achandiudza kuti ndinonyatsogadzikana, kuti ini handidi "kudzidza" .Varume ava ndivo vane yakawanda nguva yekuparadza uye iyo nguva yavanopedzera haina kuvabhadhara zvakanyanya
saka usatitaurire hunyengeri
Ndakapfuura nepano akadaro
Ini ndiri mwari asingabatsiri waMwari mukomputa uye mashandisiro.
Ndanga ndichishandisa Linux kweanopfuura makore gumi. Ini handizive zvaunoita nemufananidzo, saka mune izvo nyaya ini handigone kupindura.
Ichokwadi kuti iwe unofanirwa kusarudza mugove wakanakisa unoenda nekombuta yako uye nezvido zvako zvechirongwa (ini handizvirambe) uye kuti dzimwe nguva unofanirwa kugadzirisa zvimwe zvinhu, ikozvino ichokwadi zvakare kuti kana iwe ukabvunza chimwe chinhu unacho kupa iyo yakawanda data sezvinobvira (kugovera, desktop, marongero ekombuta yako, nezvimwewo). kana zvisina kudaro vanhu havagone kukubatsira, nekuti izvi zvakakosha. Izvi zvinotora nguva yakareba.
Ini ndoziva kuti chokwadi chekuti kune chiuru chakapihwa pachinzvimbo gumi nemaviri chazvo chaita kuti kutsvaga mhinduro kuve kwakaomarara uye dzimwe nguva kupusa uye kuti "unofanirwa kudzidza" haisiyo mhinduro. Zvinoita sekunge muridzi wepombi auya kumba kwako, ndokusiira maturusi nemirairo ndokuudza kuti "unofanira kudzidza" kugadzirisa pombi iwe pachako.
Zvakadaro, kwandiri Linux ndiyo yakanyanya kunaka sisitimu yekushandisa yandakave nayo nekure. Kana ndikaona kuwanda kwematambudziko andakapihwa neMicrosoft: kugadziridza, kubonderana, zvakanyanya kunonoka software, kusanzwisisika kwemadhiraivha, nezvimwe ... uye ndinozvifananidza neLinux, hapana ruvara.
Ichokwadi zvakare kuti kana ukavimba neimwe software, iyo inoshanda chete neWindows, zvichanetsa kuti Linux ive imwe nzira yakanaka, ndinoziva nezvevanhu vanoshanda nePhotohop uye muchina chaiwo muLinux hausi kunyange mhinduro iri kure .
Ini ndinofunga kuti kana pachinzvimbo chekuita kushambadzira kwakanyanya vakatarisa pane mashoma kugoverwa uye vakaita mirairidzo yakanaka emabhuku yakawanda yechinetso yaizonyangarika. Asi dzimwe nguva zvinonetsa kwazvo kutaura nevanhu vane hunyanzvi nekuti ivo havanzwisise matambudziko evanhuwo zvavo vasingazive computer science.
Neyekuvandudza ini ndinobvumirana uye nekudzokera kumashure kuenderana chete kana zvasvika kunzvimbo dzakareruka senge xfce mune live usb modhi.
Iwo mawebhu giants anoda kuenzanisa iwo ekuwedzera ewebhu